KUTARIRA PASI PASI PANZVIMBO YEMADZIMAI YEMAKOKO
Chinyorwa cheMhariri: Ichi chikamu chematanho anoongorora maitiro azvino uye epamberi mumusika wedigital signage. Chikamu chinotevera chichaongorora maitiro esoftware.
Dhijitari signage yave ichikurumidza kuwedzera kusvika kwayo munenge mumusika wese uye nzvimbo, kunyanya mukati. Iye zvino, vese vakuru nevadiki vatengesi vari kushandisa digitage yedhijitari muhuwandu hukuru kushambadza, kukwidziridza kuisa chiratidzo mukuvandudza ruzivo rwevatengi, maererano neDigital Signage future Trends Report. Yakawana kuti zvikamu zviviri muzvitatu zvevatengesi vakaongororwa vakati kuvandudza mabrown ndiyo yakanyanya kubatsirika yedhijitari signa, ichiteverwa nekuvandudzwa kwevatengi ne40 muzana.
Nordiska Kompaniet, mutengesi muStockholm, Sweden, semuenzaniso, akaisa zvigadzirwa zvemadhijitari aine matandi ematehwe ematehwe kumusoro uye akasungira iwo kumadziro kuti agadzire kunyengedzera kwekuti chiratidzo chaive chakarembera nebhendi. Izvi zvakabatsira zviratidziro kuti zvibatanidze pamwe neiyo mutengesi's whole sober uye yepamusoro kirasi chiratidzo chemufananidzo.
On a general level, iyo yemukati yedigital signage nzvimbo iri kuona zvirinani kuratidza kugadzirisa, uye zvirinani zvekuita zvekuvandudza ruzivo rwevatengi.
Imwe yemaitiro makuru kusimuka kure neLCD kuratidzwa kune yakawedzera mafashoni e-LED, maererano naBarry Pearmen, maneja mukati mekutengesa, Watchfire. Pearman akataura kuti kuderera kwemitengo ye LED kuratidzira kuri kubatsira kufambisa tsika iyi.
MaODI haasi kungowanda zvakanyanya, ivo vari kuitikawo zvakanyanya.
"LED yanga iripo kwenguva yakati rebei, tinoramba tichimanya tichirira, tichisimbisa maSSS uye tichiswederana," Brian Huber, maneja wechikwata chekusika, Watchfire, akataura mukukurukurirana. "Huye mazuva echiratidzo chakakura chekuti lightbulb chinoratidza vanhu vasere panguva."
Chimwe chiitiko chakakura ndechekusvitsana yakatarisana nekutarisa LED kuratidza kugadzira kwakadzika uye kutyisa zviitiko, maererano naKevin Christopherson, mukuru wezve kutengesa zvigadzirwa, NEC Ratidza Solutions.
"Direct view LED mapaneru ane zvakajairika kugadzirisa uye anogona kugadzira zvinoitika zvinokanganisa vateereri kana kugadzira zvinokwezva kuvaka zvinongedzo," Christopherson akadaro mukupinda kwake 2018 Digital Signage future Trends Chirevo "Uine pixel pitch sarudzo chero ipi neipi kubva padyo -kutarisa kutarisa. Kuona kure kwenzvimbo dzakakura, varidzi vanogona kushandisa dvLED kupa zvakasarudzika uye zvisingakanganwiki. ”
Zvirinani zvirongwa zvekubatanidzwa
Kungoita kuratidza kwakanaka hakuna kukwana kuendesa zviri nani mumba mao zviitiko. Ndokusaka madhijitari signage vatengesi vari kupa mamwe akawanda uye epamberi analytics masisitimu kuti awane akakosha ekujekesa mukati mevatengi, saka ivo vanogona zviri nani kuitisa iwo.
Matthias Woggon, CEO, anoona neziso, akataura mukupinda kwake kweDigital Signage future Trends Chirevo kuti vatengesi vari kushandisa zvekusvika sensor uye kamera yekuzivikanwa kumeso kuti vatarise ruzivo rwakakosha nezve mutengi, sekunge vari kutarisa chigadzirwa kana kuratidza.
"Zvimanje zvemazuva ano zvinokwanisa kuona magariro senge zera, zvepabonde nemumoyo nekutarisa chimiro chechiso pachiratidzo chekamera. Pamusoro pezvo, touchscreens inogona kuyera kubata pane chaiyo zvirimo uye inokwanisa kuongorora mashandiro chaiwo emishambadziro yekushambadza uye nekudzoka mukudyara, ”akadaro Woggan. "Kubatanidzwa kwekucherechedzwa kwechiso uye hunyanzvi hwekubata zvinobvumidza kuyera kuti vanhu vangani vanoita kune izvo zvirimo uye inobatsira kuumbwa kwematanho akanangwa uye kuenderera kwakasimba."
Digital signage iri zvakare kuendesa inofambidzana omnichannel zviitiko kuita nevatengi. Ian Crosby, mutevedzeri wemutungamiri wekutengesa uye kushambadzira Zytronic, akanyora mukupinda kwake kweDigital Signage future Trends Chirevo pamusoro peEbekek, amai nemwana mutengesi wechigadzirwa muTurkey. Ebekek iri kushandisa inopindirana digital signage kubatanidza ecommerce uye yakabatsira kutengesa. Vatengi vanogona kutarisa kuburikidza nehuwandu hwese hwezvigadzirwa uye vatenge kutenga vakazvimirira kana kukumbira mubatsiri wekutengesa rubatsiro.
Kuongorora kweiyo Dhijitari Signage Remangwana Trends 2018 mushumo wakasimbisa maitiro aya ekuwedzera kubatirana zviitiko. Makumi mashanu muzana evatengesi akataura kuti vakawana kubata-kubata kwakanyanya kunobatsira kwema digital signage.
Iyoyo yakakura maitiro ane ese eiyi mienzaniso, ndeye kusundira mberi kune mamwe maitiro ezvekutapa, maererano neye 2019 Dhijitari Signage Remangwana Ruzivo Rwe blog blog naGeoffrey Platt, director weReMotion
“Aya matekinoroji anomiririra ose anoshanda anoda chero chinhu chimwe chakafanana. Kugona kugadzira, kuongorora uye kuita munyika inoda chaiyo-nguva-yakagadziriswa mhinduro, ”akadaro Plt.
Munzvimbo yemukati, digital signage iri kutora ese makuru maererano neakakura, makuru kuratidza neine hunyanzvi software uye idiki, sezvo Amai nePop zvitoro vanopa zvirinyore kuratidzwa muhuwandu hukuru.
Christopherson akataura kuti digital signage ekupedzisira vashandisi uye vatengesi vanga vachigadzira mhinduro dzinogadzira vateereri vanobatirana. Nhanho huru inotevera ndipo apo zvimedu zvese zvinowira munzvimbo, uye isu tinotanga kuona mashura echokwadi achifashukira mumusika wemakambani makuru uye madiki.
"Chinhanho chinotevera ndechekuisa iyo analytics chikamu," Christopherson akadaro. "Kamwe chete kwekutanga kweaya mapurogiramu ezere-system apera, unogona kutarisira kuti tsika iyi ibve semoto wemasango sezvo varidzi vachiona kukosha kwayo kunopa."
Mufananidzo kuburikidza neIstock.com.
Nguva yekutumira: Chivabvu-13-2020